3D Cury xayndaabka, 358 xayndaabka Security, Chain bowd Link - Yeson
3D Cury xayndaabka
Sameeyey Iron xayndaabka
358 xayndaabka Security
Double Wire xayndaabka
Control badnaa xayndaabka
Anping Yeson ku yaalla Wire mesh Town caanka ah ee China- Anping. Waxaan la nuugo ee wax soo saarka mesh silig tayo sare leh tan iyo bilowgii. Iyadoo horumarinta degdeg ah, waxaan noqday wax intaas ka sii xoog, iyo dhowr laamood aan qotomiyey alaabooyinka kala duwan. waxyaabaha Our ka mid ah: silig welded mesh, mesh welded guddi, xoojinta mesh welded guddi, mesh ballaadhiyey, silig square mesh, silig hexagonal mesh, gabion mesh, bowd silsilad link, aluminium shabaqa silig, silig ahama mesh, silig bir ah, Maritime Bureau, iyo silig mandiil iwm .. waxyaabaha Our ayaa la dhoofiyo USA, Italy, Russia, Australia, Mid-East, Africa, iyo South East Asia.
in ka badan 10 khadadka-soo-saarka
Ka badan 100 milyan
20 + alaabooyinka, One-stop shopping
sameeyey bir ah
PCV silsilad link xayndaabka
silsilad madow link dayrka
bowd silsilad link galvanized
V mesh xayndaabka
alxanka deedka ku meel gaar ah
Xutuan Industrial Park, Anping, Hebei, Shiinaha
868 Double Wire Fence , 358 xayndaabka Security, Steel Palisade xayndaabka, Palisade xayndaabka, Xayndaabka Ku Meel Gaarka ah ee Dibadda , Chain Link Ku Meel Gaarka ah ,